Bit By Bit - Ethics - 6.7.1 IRB waa dabaqa ah, oo aan saqaf
cilmi badan oo u muuqdaan in ay qaban views is burinaya ee IRB. Dhinaca mid, inay ka fiirsadaan IRB ay u noqon xafiisyada a bumbling. Weliba, waqti isku mid ah, waxay sidoo kale ka fiirsan IRB ay u noqon garqaadaha kama dambaysta ah ee go'aanada anshaxa. Taasi waa, ay u muuqdaan in ay aaminsan yihiin in haddii IRB waxaa ansixiyaan, ka dibna waa in OK. Haddii aan qirayaa ah xadeynta aad u dhabta ah ee IRBs sida ay hadda jira iyo waxaa jira kuwa badan oo iyaga ka mid ah (Schrag 2010; Schrag 2011; Hoonaard 2011; Klitzman 2015; King and Sands 2015; Schneider 2015) waa Umuuraha aan sida cilmi waa in ay qaataan on dheeraad ah mas'uuliyadda anshaxa of our cilmi. IRB waa saqafka aan dabaqa ah, iyo fikrad this waxay leedahay laba saamaynta ugu weyn.
First, IRB waa dabaqa ah waxay ka dhigan tahay in haddii aad ka shaqeeya hay'ad u baahan in dib u eegis IRB, markaas waa in aad raacdo kuwa. Tani waxay u muuqan yaabaa in wax iska cad, laakiin waxaan ogaaday in qaar ka mid ah dadka u muuqdaan in ay doonayaan in ay ka fogaadaan IRB. Dhab ahaantii, haddii aad ka shaqeeya meelaha anshaxa aan saldhigan, IRB wuxuu noqon karaa saaxiib awood leh. Haddii aad raacdo xeerarka ay, waa in ay ku daba istaago wax u tagaan waa khalad aad cilmi (King and Sands 2015) . Oo, haddii aadan raacin xeerarka ay, waxaad ka heli kartaa in aad tahay soo baxay on adiga kuu gaar ah ku jira xaalad aad u adag.
Second, IRB ma aha dhismo ka dhigan tahay in kaliya buuxinta foomamka iyo socda xeerarka in aan ku filan. Xaaladaha badan oo aad sida cilmi waa mid ka mid ah kuwa ugu badan oo ku saabsan sida loo anshaxa waafaqsan ogyahay. Ugu dambayntii, aad tahay cilmi iyo mas'uuliyadda anshax been kula; waa magacaaga on warqada.
Mid ka mid ah habka si loo hubiyo in aad loo daweeyo IRB sida dabaqa ah oo aan saqaf waa in ka mid ah lifaaqa ah anshaxa in waraaqahaaga. Dhab ahaantii, aad qortid kara lifaaqa anshaxa ka hor waxbarasho xataa bilaabmaa si ay naftaada ku qasbi in aad ka fikirto sida aad u facooda iyo dadweynaha wuxuu sharxi doonaa shaqadaada. Haddii aad raaxo halka qoraal aad lifaaqa, ka dibna aad daraasadda shaqa joojin ma laga yaabaa in dheelitirka anshaxa ku haboon. Waxa intaa dheer in caawinta aad ogaado in aad shaqada u gaar ah, soo bandhiga aad lifaaqyada anshaxa caawin doonaa bulshada cilmi hadlaan arrimaha anshaxa iyo adkeeyo xeerarka haboon ee ku salaysan tusaalayaal laga cilmi taaban dhabta ah. Shaxda 6.3 Wargeysyada cilmi taaban joogo waxaan u maleynayaa leeyihiin wadahadalo wanaagsan anshaxa cilmi baarista. Ma ku raacsan tahay sheegasho kasta by qorayaasha doodaha kuwan, laakiin waxay yihiin oo dhan tusaale u ah cilmi-simaha la daacadnimada in dareenka lagu qeexay Carter (1996) : haddii ay dhacdo kasta, cilmi (1) go'aan ka waxa ay la tahay waa xaq iyo waxa khaldan; (2) waxay u dhaqmaan oo ku salaysan waxa ay go'aansadeen, xitaa at qiimaha shakhsi ahaaneed; iyo (3) waxay si cad u muujiyaan in ay yihiin shaqeeya ee ku salaysan ay falanqaynta anshaxa ee xaaladda.
Shaxda 6.3: Waraaqaha la wada xiiso leh oo ka mid ah anshaxa ee ay cilmi-baarista.
Rijt et al. (2014) tijaabo beerta ogolaansho la'aan
fogaado waxyeelo xaaladeed
Paluck and Green (2009) tijaabo beerta dalka soo koraya
cilmi baaris ku saabsan mawduuc xasaasi ah
arrimaha ogolaanshaha adag
dhaqancelinta ee waxyeellooyinka suurto gal
Burnett and Feamster (2015) cilmi ogolaansho la'aan
dheelli khataraha iyo faa'iidooyinka marka khatarta way adag tahay in tiradeeda
Chaabane et al. (2014) saamaynta bulsheed ee cilmi
isticmaalaya faylasha xogta xaday
Jakobsson and Ratkiewicz (2006) tijaabo beerta ogolaansho la'aan
Soeller et al. (2016) marka la eego xad adeegga